ကျမ က Spa ပါ မောင်င်င်င် ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Health & Fitness » ကျမ က Spa ပါ မောင်င်င်င် ။	12
ကျမ က Spa ပါ မောင်င်င်င် ။
Posted by Foreign Resident on May 19, 2015 in Health & Fitness | 12 comments
အင်းးး ဒီ Post လေးကတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ၊
ပြီးခဲ့တဲ့ လ တုန်းက ကို Black Chaw က တောင်းဆိုထားတဲ့ ၊
( အဘ ကို ကျန်းမာရေး လိုက်စားသူကြီးမှန်း သိနေတော့ကာ )
မြန်မာပြည် က ( တကယ် ကတော့ ရန်ကုန် မြို့ က ) ၊
Spa နှင့် Sauna တွေ အကြောင်းလေးတွေပါ ။
ရွာသူားတွေ အတွက် ကျန်းမာရေး နှင့် အလှအပ ဗဟုသုတပေါ့ဗျာ ။
အမှန်တော့ Sauna ချွေးထုတ်တယ် ဆိုတာ ၊
Spa ကျန်းမာရေး နှင့် အလှအပ ခေါင်းစဉ်အောက်က တစ်ခု ပေါ့လေ ။
ပထမဦးဆုံးအနေနှင့် ၊ ရန်ကုန် မြို့ က Sauna အစစ်လေး တစ်ခု အကြောင်းပေါ့ ။
အဘ ကြားမိသလောက်ကတော့ ရန်ကုန် မြို့ မှာ ၊
Sauna အစစ် က အဲဒီတစ်ခုဘဲ ရှိတယ် ပြောတာဘဲ ။
အဲ့သဟာကတော့ ၊ ” Golden Park ” ဆိုတဲ့ ၊
Korea Style Sauna / Spa Land ပါ ။
သူက မြောက် ဒဂုံ မြို့နယ် ၊ ပင်လုံလမ်း နှင့် ပြည်ထောင်စု လမ်းထောင့် အကျော်က ၊
မြန်မာနိုင်ငံ မြင်းစီး အဖွဲ့ ကွင်းကြီး အတွင်းမှာ တည်ရှိပါတယ် ။
မျက်စိထဲ မြင်အောင် ပြောပြရရင် ၊ ပါရမီ လမ်းမကြီး အတိုင်း ၊
တည့်တည့် ဆင်းလာတဲ့လမ်း ( ပင်လုံလမ်း ) ပေါ်မှာပေါ့ကွယ် ။
ဘေလီ တံတားကိုကျော် တည့်တည့် ဆက်ဆင်းလာခဲ့ပေါ့ ။
အဲ့ဒီ့ လမ်းဆုံကို မဝတ လမ်းဆုံ လို့လည်း ခေါ်သေး ။
ဒါကတော့ ” Golden Park ” အဆောက်အဦးကြီးပေါ့နော် ။ မြန်မာနိုင်ငံ မြင်းစီး အဖွဲ့ ကွင်းကြီး အဝင်ပေါက်ကနေ စဝင်ရင် ၊
ဘယ်ဖက်အခြမ်းမှာ ရှိပါတယ် ။ ဂိတ်စောင့် ကို မေးလိုက်ရင်ရပါတယ် ။
110 ဒါကတော့ Golden Park အဆောက်အဦးကြီးပေါ့နော် ။
ပုံရဲ့ ညာဖက်က အဓိက ဝင်ပေါက်ကနေဝင်လိုက်ရင် Reception ပါ ။
Reception မှာ Spa သုံးပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါ ။
တစ်နေ့တာလုံး Spa သုံးခ (7am to 8 pm ) ၉၀၀၀ ကျပါလိမ့်မယ် ။
ည ၈ နာရီကို ကျော်ပြီး ဆက်နေရင်တော့ ၂၀၀၀ နောက်ထပ် ပေးရပါမယ် ။
အဲ့ဒီမှာ Reception က လဲဖို့ ချွေးစိုခံ အဝတ်တစ်စုံ နှင့် ၊
ပစ္စည်းတွေ သိမ်းဖို့ နံပါတ်ပါတဲ့ Locker သော့လေး ပြန်ပေးလိမ့်မယ် ။
အဲ့ဒီ Spa ထဲမှာ ဘာပဲ စားစား ၊ ဘာပဲ ထပ် သုံးသုံး ၊
အဲ့ဒီ Locker သော့ နံပါတ် နှင့်ဘဲ မှတ်ထားတော့မှာ ၊
ထပ်ပြီး ကျသမျှ အကုန်လုံး ပြန်အထွက်ကျမှ ရှင်းရမှာ ။
111 ဒါကတော့ Golden Park Spa Land ရဲ့ ကြော်ငြာလေး တစ်ခု ပါ ။
သူတို့ဆီက Waiter ကောင်လေးတွေက ၊
ပစ္စည်းတွေ သိမ်းရမယ့် Locker လေးဆီကို လိုက်ပြလိမ့်မယ် ။
အဲဒီမှာ သူတို့ပေးတဲ့ ချွေးစိုခံ အဝတ်တွေလဲပြီးရင် စ လို့ရပြီ ။ ဒါကတော့ အဝတ်လဲခန်း နှင့် ပစ္စည်းသိမ်း Locker လေးတွေပါ ။ 112 ဒါကတော့ အဝတ်လဲခန်း နှင့် ပစ္စည်းသိမ်း Locker လေးတွေပါ ။
112 ဒါကတော့ အဝတ်လဲခန်း နှင့် ပစ္စည်းသိမ်း Locker လေးတွေပါ ။
သိပ် ထူးထူးခြားခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး ၊
စုစုပေါင်း Sauna ခန်း ၄ ခန်း နှင့် ရေချိုး / စိမ်ကန် ၃ ကန်ရှိတယ် ။
အဲ့ဒီ Sauna ခန်း နှင့် ရေချိုး / စိမ်ကန် တွေဟာ တစ်ခု နှင့် တစ်ခု ၊
အမျိုး အစား တွေလည်း မတူဘူး ၊ အပူချိန် တွေလည်း မတူဘူး ။
113 Temp မတူ အမျိုးအစားမတူ တဲ့ အခန်း ၄ ခန်းမှာ ၁၅ မိနစ်စီ ချွေးထုတ်တာပါဘဲ ။
ပထမ ဦးဆုံး Ocher Room ဆိုတဲ့ မြေစေး မြေနီခန်း ကို ဝင်ရတယ် ။
အဲ့ဒီ အခန်း ရဲ့ အပူချိန်က 53 deg C ရှိတယ် ။
အဲ့ဒီ အခန်းထဲမှာ ၁၅ မိနစ် ချွေးထုတ်တယ် ။
ပြီးရင် အပြင်ဘက်က Hall ထဲမှာ ၁၀ မိနစ် ခဏ နားတယ် ။
( အပူချိန် နှင့် အမျိုးအစား မတူတဲ့ နောက် တစ်ခန်းကို ဝင်ဖို့ အဆင်ပြေအောင် )
ဒုတိယ က Charcoal Room ဆိုတဲ့ ကျောက်မီးသွေးခန်း ကို ဝင်ရတယ် ။
အဲ့ဒီ အခန်း ရဲ့ အပူချိန်က 54 deg C ရှိတယ် ။
ပြီးရင် အပြင်ဘက်က Hall ထဲကို ပြန်ထွက်ပြီး ၁၀ မိနစ် ထပ် နားတယ် ။
တတိယ က Salt Room ဆိုတဲ့ ဆား ခန်း ကို ဝင်ရတယ် ။
အဲ့ဒီ အခန်း ရဲ့ အပူချိန်က 41 deg C ရှိတယ် ။
နောက်ဆုံး အနေနှင့် က Ice Room ဆိုတဲ့ ရေခဲ ခန်း ကို ဝင်ရတယ် ။
အဲ့ဒီ အခန်း ရဲ့ အပူချိန်က – 8 deg C ( အနှုတ် ၈ နော် ) ရှိတယ် ။
Ice Room ဆိုတဲ့ ရေခဲ ခန်း ထဲမှာ ပိုက်လိုင်းကြီး တစ်လျှောက် ရေတွေခဲနေတယ် ။
အဲ့ဒီ အခန်းထဲမှာ ၁၅ မိနစ် အအေးခံ တယ် ။
ရှေ့ သုံးခန်းမှာ ကျယ်သွားတဲ့ မွှေးညှင်းပေါက်တွေ ပြန်ကျဉ်းသွားမယ် ။
114 Ice Room ဆိုတဲ့ ရေခဲ ခန်း ထဲမှာ ပိုက်လိုင်းကြီး တစ်လျှောက် ရေတွေခဲနေတယ် ။
လိုရင်းကတော့ ၊ Temp မတူ အမျိုးအစားမတူ တဲ့ ၊
အခန်း ၄ ခန်းမှာ ၁၅ မိနစ်စီ ချွေးထုတ်တာပါဘဲ ။ Temp မတူတဲ့အတွက် ကြားထဲမှာ ၁၀ မိနစ်စီ ခြားခြားပေးရသပေါ့ ။
အဲ့ဒီအခန်းတွေရဲ့ အရှေ့မှာ နှင့် အထဲမှာတော့ ၊
ဒီအခန်း တွေ အထဲမှာ ချွေးထုတ်ရခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ရေးထားတယ် ။ တခြား အခန်းတွေကိုတော့ မပြောလိုပါဘူး ၊ အမှတ်ထင်ထင် ဖြစ်သွားစေတဲ့ ၊
Charcoal ကျောက်မီးသွေးခန်း မှာ ချွေးထုတ်ရခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးကတော့ ၊ ဟီ ဟိ ၊ အံ့မခန်းပါဘဲကွယ် ၊ ဖတ်သာကြည့်ကြပေတော့ ။
115 Charcoal ကျောက်မီးသွေးခန်း မှာ ချွေးထုတ်ရခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးကတော့ ။
အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ ၊ ရေချိုး / စိမ်ကန် ၃ ကန်ရှိတဲ့ ရေချိုးခန်း ကိုသွားရတယ် ။
ရေချိုးခန်းထဲ မဝင်ခင်မှာတော့ ရေကူး ဘောင်းဘီလေး ပြောင်းဝတ်ရသပေါ့ ။
အဲဒီမှာ ဗမာတွေကသာ ရေကူး ဘောင်းဘီ ပြောင်းဝတ်ကြတာပါ ။
အဟင့် ၊ ကိုရီးယားတွေကတော့ ဘာမှမဝတ်ကြဘဲ ၊
ကိုယ်တုံးလုံး နှင့်ဘဲ ရေကူး ရေချိုးနေကြတာ တွေ့နေရသကွယ် ။
မျက်စိ ရှက်စရာပေါ့လေ ၊ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ၊ သူ့ ယဉ်ကျေးမှုပေကိုး ။
116 အဲ့ဒီထဲက ရေချိုးကန် ၃ ကန် ကလည်း Temperature မတူပါဘူး ။
အဲ့ဒီထဲက ရေချိုး / စိမ်ကန် ၃ ကန် ကလည်း Temperature မတူပါဘူး ။ ရိုးရိုး ရေ အပူချိန်ဘဲ ရှိတဲ့ ရေကူးလို့ရတဲ့ ကန် အရှည် တစ်ခုလဲ ပါပါတယ် ။
ဘေးမှာလည်း ထိုင်ပြီး ရေချိုးလို့ရတဲ့ နေရာတွေ ၊ ရပ်ပြီး ရေချိုးလို့ရတဲ့ နေရာတွေ ရှိပါတယ် ။
117 ထိုင်ပြီး ရေချိုးလို့ရတဲ့ နေရာတွေ ၊ ရပ်ပြီး ရေချိုးလို့ရတဲ့ နေရာတွေ ရှိပါတယ် ။
အဲ့ဒမှာ ၊ ရေနွေးစိမ်လိုက် ရေချိုးလိုက် ပြီးရင်တော့ ၊
Sauna ကိစ္စ ပြီးပါပြီ ။
နောက်ထပ် ပြောစရာတွေကတော့ အဲဒီ့ Sauna ခန်းမကြီး ၊
ဘေးကပ်ရက်မှာ အလှပြင်ဆိုင် ရှိပါတယ် ။
တစ်ချို့ Sauna လုပ်ရင်း တန်းလန်းနှင့် မျက်နှာ ပေါင်းတင်နေတာ တွေ့ခဲ့တယ် ။
118 Sauna ခန်းမကြီး ရဲ့ အပေါ် ၃ ထပ်မှာတော့ အနှိပ်ခန်း ရှိပါတယ် ။
Sauna ခန်းမကြီး ရဲ့ အပေါ် ၃ ထပ်မှာတော့ အနှိပ်ခန်း ရှိပါတယ် ။
အဘလဲ Sauna ဝင်ပြီး တစ်ဆက်ထဲ အနှိပ်ခန်း ဆက်ဝင်ခဲ့ပါတယ် ။
တစ်နာရီ ဆက်ရှင် ကို ၆၀၀၀ ပါ ၊ တစ်နာရီခွဲ ဆက်ရှင် ဆို ၁၀၀၀၀ ပါ ။
အနှိပ်ခံပြီးတဲ့အခါ ဗိုက်ကလဲ ဆာလာတာ ၊
အပြင်ထွက်ပြီး စားဖို့ကိုလဲ မစောင့်နိုင်တော့တာနှင့် ၊
Sauna ခန်းမကြီး ဘေးကပ်ရက်မှာရှိတဲ့ Restaurant မှာဘဲ စားလိုက်ပါတယ် ။
ကိုရီယားစာ Bulgogi တဲ့ တစ်ပွဲကို ၈၀၀၀ ကျပါတယ် ။
တော်တော်များသကွဲ့ ။ အဘ တစ်ဝက်လောက်ဘဲ စားလို့ ကုန်ပါတယ် ။
119 ကိုရီယားစာ Bulgogi တဲ့ တစ်ပွဲကို ၈၀၀၀ ကျပါတယ် ။
ဒီနေ့ Sauna လာတာ ချွေးတော့ အတော်ထွက်ပါရဲ့ ၊
အအေး က ဖရဲဖျော်ရည် ၁ ၊ 100 Plus ၁ ၊ Shark ၁ သောက်ဖြစ်သွားတော့ ၊
ချွေးထွက်တာထက်တောင် အဝင် Intake က ပိုများနေမယ် ထင်ပါ့ ။
ဒီ ” Golden Park ” ထဲမှာ သုံးသမျှတွေကို ၊
လက်မှာပါတ်ထားတဲ့ Locker သော့ နံပါတ်လေး နှင့်ဘဲ မှတ်ထားပါတယ် ။
ကျသလောက်ကို ပြန်အထွက်မှ ကောင်တာမှာ ရှင်းယုံပါဘဲ ။
အင်းးးးးး ဒီ Spa တစ်ခုတည်းကိုဘဲ ကြော်ငြာဝင်နေရင် ၊
မတရားသလိုတော့ ဖြစ်တော့မှာဘဲ ။
အဲဒီတော့ကာ လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့မှာ ၊
နေရာအခင်းအကျင်း ရော ဝန်ဆောင်မှု ကော ဈေးနှုန်း ပါ ၊
သင့်တင့်တဲ့ နောက် Spa တစ်ခု အကြောင်းပါ တင်ပြလိုက်ပါတယ် ။
အဲဒီ Spa ကတော့ Vintage Luxury Yacht Hotel ရဲ့ ၊
၃ လွှာ မှာ တည်ရှိတဲ့ ” Water Spa ” ပါဘဲ ။
Vintage Luxury Yacht Hotel ဆိုတာကတော့ ၊ ဖွင့်ကာစမှာ ၊ မြန်မာမလေးတွေ ဒူးတုပ် ကြိုဆိုလို့ ၊ နာမည် ကြီး ခဲ့တဲ့ Hotel ပါဘဲ ။
ဗိုလ်တစ်ထောင် ဆိပ်ကမ်းက သင်္ဘောကြီးပေါ်မှာ တည်ရှိပါတယ် ။
121 ဗိုလ်တစ်ထောင် ဘုရား နောက်ခံ နှင့် Vintage Luxury Yacht Hotel သင်္ဘောကြီး ။
အဲ့ဒီ Hotel ရဲ့ Motto တစ်ခုကလည်း ၊
” Time travel Yacht will take you back to year 1920 in 30 seconds & beaKing “
၁၉၂၀ ခုနှစ်က ဘုရင်လို ခံစားစေချင်တာ ဆိုတော့ ၊
ဒူးတုပ်ပြီး Service ပေးရတော့တာပေါ့ဗျာ ။
123 သင်္ဘောကို ပြင်ဆင်ထားပုံကလည်း ၁၉၂၀ ခုနှစ်က ဒီဇိုင်းမျိုးပေါ့ ။
ထားပါ အဲ့ဒီ့ ၃ လွှာက Water Spa မှာက ၊
Spa Package ပေါင်းများစွာ ရှိသပေါ့ဗျာ ။
အဲဒီထဲက စိတ်ဝင်စားတဲ့ Package အချို့က ၊
1 ။ Herbal Oil Massage – 1 Hour – 50000 Ks ။
2 ။ Olive Oil Massage – 1 Hour – 35000 Ks ။
3 ။ Relaxation Body Package –2Hour – 90000 Ks ။ 3.1 – Sea Salt Body Scrub – 30 mins
3.2 – Steam / Sauna – 30 mins
3.3 – Bath Room – 30 mins
3.3 – Herbal Oil Massage – 30 mins
122 Relaxation Body Package –2Hour – 90000 Ks ။
ဈေးတွေများလှပါလားလို့ လန့်မသွားပါနှင့်ဗျာ ။
သူက 11:30 AM ကနေ 16:30 PM အထိ ဆို 50 % Discount ပေးနေပါတယ် ။
အဲဒီတော့ကာ အခုရေးထားတဲ့ ဈေးတွေရဲ့ တစ်ဝက်ဘဲပေးရတော့မှာလေ ။
ဥပမာ Herbal Oil Massage – 1 Hour မှ 25000 ဘဲပေးရတော့မှာလေ ။
Olive Oil Massage – 1 Hour မှ 20000 လောက်ဘဲပေးရတော့မှာလေ ။
အဲဒီတော့ကာ Hotel Shwe Gone Dine တို့ Yangon City Hotel တို့မှာ
Oil Massage – 1 Hour ကို 25000 လောက်ပေးနေရတာနှင့် နှိုင်းရင် ၊
Vintage Luxury Yacht Hotel က အရမ်း တန်နေတာပေါ့ ။
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ Massage ရှိတဲ့ Hotel တွေထဲမှာ ၊
Vintage Luxury Yacht Hotel ရဲ့ အဆင့်က ၊
Hotel Shwe Gone Dine တို့ Yangon City Hotel တို့ထက် မြင့်တယ်လေ ။
သူက Chatrium Hotel တို့ Park Royal Hotel တို့ အဆင့် ရှိတယ် ။
( အဲ ၊ ကြုံလို့ တစ်ခုပြောပြရရင် Yangon City Hotel မှာ သင်္ကြန် ပြီးကတည်းက ၊
Oil Massage ကို ၃ ထပ် ၊ ရိုးရိုး Traditional Massage ကို ၄ ထပ် ပြောင်းသွားပြီ ။
အရင်တုန်းကလို ၅ လွှာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ၊ သိလား )
124 သင်္ဘော ရဲ့ Starboard Side ညာဖက်ခြမ်းက အခန်းတွေက မြစ်ရှုခင်း မြင်ရမယ် ။
( ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်က ညဖက်ဖြစ်နေလို့ မမြင်ရတာ ၊ အပြင်မှာ ဝရန်တာ ရှိတယ် )
ထားပါတော့ ၊ လိုရင်းပြန်သွားရရင် အဘကတော့ ၊
Relaxation Body Package –2Hour ဘဲ ယူလေ့ရှိပါတယ် ။
အဓိက ကတော့ ရေချိုးတဲ့အခါ ကျောကုန်းက ချေးတွေကို ချွတ်ဖို့ ၊
လက်လှမ်းမှ မမှီဘဲကိုး ။ အဲ့ဒီမှာဘဲ သွားချွတ်ရတော့ သပေါ့ ။
အဲ့ဒီမှာတော့ ၊ အပေါ်မှာ ရေးထားသလိုပါဘဲ ၊
ရောက်ရောက်ချင်း Sea Salt နှင့် Body Scrub ကို 30 mins လုပ်တယ် ။
ပြီးရင် ပေါင်းအိုးနှင့် စင်လေးထဲမှာ Steam / Sauna ကို 15 mins လုပ်တယ် ။
Steam / Sauna ကို 15 mins လုပ်ပြီးရင် ရေအေးသောက်ပြီး 15 mins စောင့်တယ် ။
ပြီးတော့ ရေချိုးခန်းမှာ ရေချိုးပေးတယ် ။
ရေချိုး ပြီးရင် Herbal Oil နှင့် တကိုယ်လုံး Massage လုပ်ပေးတယ် ။
ပြောရရင် ၊ Spa အနေနှင့်ကတော့ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားတော့ မရှိလှပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ Hotel & Service အဆင့်အတန်း နှင့်ဆိုရင် ၊
( 50 % Discount ပေးနေတော့ ) ဈေး အနေနှင့် တန်တယ်လို့ ထင်မိလို့ ၊
အခမဲ့ ကြော်ငြာဝင်ပေးမိတာပါဗျာ ။
( Sauna အစစ် က တစ်ခု နှင့် ဈေးတော်တဲ့ Spa လေးက တစ်ခု ပေါ့ )
125 ဘယ်ဖက်က Body Scrub လုပ်တဲ့စင် ၊ ညာဖက်က Sauna လုပ်တဲ့ ပေါင်းအိုးနှင့် စင် ။
ကြောင်ဝတုတ် says: ဗဟုသုတပြည့်စုံလှပါပေတယ်… အဘဖောခင်ဗျား…
ခင်ဇော် says: Saved…!!
Foreign Resident says: မမချွိ အတွက် တမင်သက်သက် ကို ၊
ကိုရီယားစာ Bulgogi ပုံ ထည့်ပေးထားတာပါနော် ။
Mike says: .မရောက်ဖူးရုံမက ကြားပါမကြားဖူးတာမို့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြပေးတဲ့ ကိုရင်ဖေါကိုကျေးဇူးပါ
.ကိုရင်ဖေါတို့ကတော့အတွေ့အကြုံ စုံသဗျို .တစ်ခုမေးမလို့..Massage လုပ်ပေး၊ ရေချိုးပေးတာတွေက မိန်းမချောလေးတွေပေါ့နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: Golden Park က ကျွန်တော်တို့နဲ့နီးတယ် သွားမယ်လို့ စဉ်းစားနေတာ မသွားဖြစ်သေးဘူး။ တစ်ခေါက်တော့ သွားဦးမှပဲ သင်္ဘောဟိုတယ်လ်ကတော့ ကိုယ်တွေနဲ့မတန်သေးဘူးလို့ပဲ မှတ်ပါ့မယ် ဈေးအလွန်ကြီးတဲ့အတွက်။
Foreign Resident says:့ အောင် မိုးသူ says:
” တစ်ခေါက်တော့ သွားဦးမှပဲ ”
တန်တော့ ၊ Charcoal ကျောက်မီးသွေးခန်း မှာ ၊
့ချွေးထုတ်ရခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေကို ကြိုက်သွားပြီ ထင်တယ် ။
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: ကျန်းမာရေး လိုက်စားတတ်တဲ့ အဘဖောအား.. အားကျ အတုယူသွားကြောင်းပါ။
မျက်စိလည် လမ်းမှားပီး အဲ့လိုမျိုး ကျန်းမာရေးခန်းတွေရောက်ရင် ကျနော်ကတော့
တော်တော်နဲ့ ပြန်မထွက်တတ်တော့ဘူး..။ သင်္ဘောပေါ်မှာ အလုပ်ပဲလုပ်ဖူးတာ
အနှိပ်မခံဖူးတော့ အဲ့နေရာလေးတော့ မဒမ်နီ မသိအောင် ကျိတ်မှတ်သွားပါကြောင်းလေး
ဒီလို ကျန်းမာရေးဝါသနာပါသူ ကျနော့်တီု့အတွက် ရေးပြပေးတဲ့ အဘဖောကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အဘဖောရေ မသိသေးတာ သိရလို့ ကျေးဇူးပါ ၊
ဒါပေမယ့် အဘဖောလိပ်စာတွေက ဝေးသမို့ ဆင်ရေတွင်းက ဖရက်ရှာ ဒါမှမဟုတ်
စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တိုင်နားက ဆမ်းမားပဲလေ့စ်တို့လောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်နေရသဗျို့ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 138
​ဒေါ် လေး says: အဘ ရေ golden park ကိုတော့ ရောက်ဖူးတယ်
ဖွင့်ကာစမို့လားမသိ လူအရမ်းများပြီ ပေးတဲ့တဘက်တွေ က
အနံ့သိပ်မကောင်းတော့ဘူး အဘပြောသလိုဘဲ ကိုးရီးယားမတွေက
အဘ ရေးပြ မှ ပိုပြီးစုံစုံလင်လင် သိရတယ်
မြစပဲရိုး says: အသာလုပ်ပါ အဘဖော ရယ်။
. ခေါင်းစဉ်ကို နေးတစ်စပီကာသံ မဟုတ်ဘဲ နပိ သံ နဲ့ ထွက်လိုက်ရင် ဒွတ်ခ။ (စီဒီ- မွသဲ)
အနှိပ်ခန်း က နှိပ်ပေးတာ ရိုဘော့လား၊ ကျားလား၊ မလား။
” Massage လုပ်ပေး၊ ရေချိုးပေးတာတွေက မိန်းမချောလေးတွေပေါ့နော် ”
” အနှိပ်ခန်း က နှိပ်ပေးတာ ရိုဘော့လား၊ ကျားလား၊ မလား။
ဟဲ ၊ ဟဲ ၊ ဒီမှာဘဲ ၂ ယောက်ပေါင်း ဖြေလိုက်မယ် ။
ကျနော့်မှာက ရောဂါ တစ်မျိုး ရှိနေသဗျ ။ အဲ့ဒီ ရောဂါ က ၊
့ယောက်ျားလေးတွေ နှင့် ထိရင် Allergic လိုမျိုး ထလာသဗျ ။
အဲ့သဟာနှင့်ဘဲ ၊ ဟဲ ၊ ဟဲ ၊
အမျိုးသမီး / သာမီးလေးဒွေ ( ဂျဂါးတောင် ပီတော့ဝူး ) နှင့်ဘဲ ၊
့ရေချိုး ရ ၊ အနှိပ်ခံ နေရတော့သပေါ့ဗျာ ။
အင်းးးး ၊ ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ အနှိပ်ခန်းမှာ ၊
အမျိုးသား အနှိပ်သမား / ရေချိုးပေးသူ မရှိတာလည်း ပါသပေါ့လေ ။
့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် မရှိရှာတဲ့ ကျနော့်ဘဝ ပါဗျာ ။
အင်းးးး ၊ ဘဝ ၊ ဘဝ ။ ဟီ ဟိ ။
manawphyulay says: အင်း သွားချင်ပေမယ့် အဘဖောပြောတဲ့ နေရာတွေကို ခုလောလောဆယ်တော့ သွားလို့ မရသေးလို့ မှတ်ပဲ ထားလိုက်တော့မယ် အဘရေ….